Mamokatra vokatra ny hafatra
Alatsinainy, 20 Jona, 2011 Alarobia, Oktobra 16, 2013 Jenn Lisak Golding
Rehefa marketing izahay, matetika, dia mieritreritra momba ny valiny fotsiny isika. Te-hanova an'io vinavina io aho, tiantsika ny hahafantaran'ny olona ny Product X, iriko ity retweet / fizarana marobe, sns. mandeha ny hafatra. Na izany aza, hitako fa rehefa tsy nanana tanjona manokana tamin'ny hafatra momba ny varotra aho dia nanana ny firotsahana na ny valiny lehibe indrindra.
Eritrereto izany: efa nanoratra lahatsoratra iray izay nitovy kokoa tamin'ny bilaogy miorina amin'ny hevitra mifono hevitra manohitra ny "Dingana 10 amin'ny fomba hanatsara ny bilaoginao" ve ianao? Inona no ambaratonga fanehoan-kevitra / fandraisana andraikitra amin'io lahatsoratra io? Vonona ny hiloka aho fa somary mihoatra ny lahatsoratra "soatoavina-manampy" mahazatra momba ny fampidirana ireo marika meta.
Amin'ny manaraka dia manana zavatra holazaina ianao izay mety ho mifototra amin'ny hevitra kokoa noho ny manampy sanda, soraty izany. Omeo ny hevitrao. Na tsy eken'ny olona aza dia azonao atao ny manomboka resaka misy heviny izay hankafizin'ny olona sy hizarany.
Valiny ao amin'ny Twitter ary hividy izy ireo
Ny tantaran'ny analytics an-tranonkala sy sosialy